Afọ 20 na-emepụta ihe na-emepụta ụlọ, arịa ụlọ, ụlọ ime ụlọ, ime ụlọ na-eme, setịpụrụ Ezi nri
Ezigbo Okomoko bụ nka,
Oge na-agba akaebe n'eziokwu!
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ imeju ndị ahịa anyị oke nkenke na ntụkwasị obi dị mma iji hụ na ndị ahịa ọ bụla nwere ike inwe ahụ iru ala ma nwee ntụkwasị obi na ngwongwo anyị na ngwa ha. Ha nwere ọtụtụ atụmatụ nke na-akwado mgbasa na ngwa.
Kacha ọhụrụ imewe oge gboo osisi sofa mere na China | Ezigbo GH59
Ulo bu ebe obi di. Họrọ ihe pụrụ iche, sokwa oge gboo osisi sofa ndị dị ọnụ ọnụ ma dịrị mma maka ụlọ obibi gị. Anyị bụ ndị a ma ama kpochapụwo American ngwá ụlọ emeputa ke China, Goodwin bụ ihe kasị mma ị họọrọ. Kpọtụrụ anyị maka ndị ọzọ oge gboo osisi sofainfo. Kpọtụrụ: Tess Ekwentị: 0086-76923188817 ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka: 0086-13925525570 Weebụsaịtị: www.goodwinfurniture.com
China sofa factory, ochie sofa maka ime ụlọ Goodwin GH55
Anyị tinyere aka na imepụta na sofa ojii ochie maka ebe obibi maka ihe karịrị afọ 20. Na-agba mbọ maka mma ngwaahịa mma na imewe. Goodwin arịa ụlọ, ihe osise nke ndụ. Anyị bụ ndị a ma ama kpochapụwo American ngwá ụlọ emeputa ke China, Goodwin bụ ihe kasị mma ị họọrọ. Kpọtụrụ anyị maka ihe ochie ochie sofa maka ndụ ụlọ obibi. Kpọtụrụ: Tess Ekwentị: 0086-76923188817 ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka: 0086-13925525570 Weebụsaịtị: www.goodwinfurniture.com
Onyinye ezigbo ụlọ kacha mma na-ere akwụkwọ na-acha ọcha akwụkwọ na-acha ọcha
Anyị nyefere onwe anyị n'iwu na mmepụta nke ọnụahịa ire ọkụ na-acha ọcha akwụkwọ na-acha ọcha akwụkwọ na-acha ọcha akwụkwọ na-osisi osisi maka ihe karịrị afọ iri abụọ. Ịgbalịsi ike maka mma ngwaahịa dị mma na imewe. Ezigbo arịa ụlọ, onye na-ese ihe nke ndụ.Anyị bụ ndị na-emepụta ngwaahịa a na-ewu ewu na China, Goodwin bụ nhọrọ kachasị mma gị.Kpọtụrụ anyị maka ọnụahịa ire ere na-acha ọcha na-acha ọcha.Kpọtụrụ: TessEkwentị: 0086-76923188817 ma ọ bụ ekwentị: 0086-1392525920Weebụsaịtị: www.goodwinnlowelment
Styledị ụlọ nke ọhụụ ọhụrụ nke mbata akpụkpọ anụ ochie | Ezigbo GF01
New $ mbata ochie akpụkpọ anụ bed bụ anyị isi ngwaahịa, osisi siri ike n'ụlọ ngwá ụlọ tinyere bedrooms, sofas, iri tent, kọfị tebụl, tebụl, oche, akwa, na ndị ọzọ. Adịchaghị mma, akara ngosi akara ngosi. Anyị bụ ndị ama ama ama ama american na-arụpụta ụlọ na China, Goodwin bụ nhọrọ kachasị mma. Kpọtụrụ anyị maka ihe ọhụrụ mbata ochie ochie akpụkpọ anụ bed Ama. Kpọtụrụ: Tess Ekwentị: 0086-76923188817 ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka: 0086-13925525570 Weebụsaịtị: www.goodwinfurniture.com
Ọrụ mmezi maka ihe pụrụ iche ma ọ bụ ihe ịma aka.
1. Ajụjụ: Ndị ahịa na-agwa ụdị ihe achọrọ, nkọwapụta arụmọrụ, usoro ndụ, na nnabata chọrọ.
2. Design: Thetù ndị mepụtara na-etinye aka site na mmalite nke ọrụ iji hụ na ngwaahịa kachasị mma maka ngwaahịa iji gboo mkpa ndị ahịa ..
3. Nlekọta Ogo: Iji nye usoro dị elu, anyị na-arụ ọrụ dị irè& Sistem Nchịkwa Ogo tozuru oke.
4. Mass Production: Ozugbo a gosipụtara ihe ngosi maka usoro maka ụdị, ọrụ, na ọchịchọ, mmepụta bụ ọkwa ọzọ.
5. Anyị nwere ike ịhazi njem maka iwu - ma site na ọrụ nke anyị, ndị na-eweta ngwaahịa ndị ọzọ ma ọ bụ nchikota ha abụọ.
Ejiri anyị n'ime ụwa ngwaahịa nke ndị ahịa anyị. Mana anyi adighi adi nma na ihe ndi ozo nke akuku; anyị na-enyocha onwe anyị n’ime ajụjụ dịka: “Gịnị na-eme ndị ahịa anyị obi ụtọ?” "Olee otú anyị pụrụ ịkpalite ọgwụgwụ n'ji si zuo ọchịchọ?" Nke a bụ ihe anyị ga-eme gị. Nke a bụ otu anyị si atụgharị ọrụ gị na ọrụ anyị.
Recently Real Feedbacks from Our Latest Clients All Around the World
N'oge na-adịbeghị anya ezigbo nzaghachi na ndị ahịa ọhụụ gburugburu ụwa.Anyị bụ ndị a na-ebu ihe eji eme ihe na-ewu ewu na chinawwin si China na afọ 20 nke arịa ụlọ. Site na ngwaahịa dị elu na ọrụ dị elu, ngwaahịa ndị anyị na-ekpuchikwa akụkụ niile nke ụwa.Ọtụtụ ndị ahịa na-azụta arịa ụlọ ọrụ anyị na ha dị ka arịa ụlọ ahịa nke anyị dị ka nzaghachi video.Kpọtụrụ anyị maka arịa osisi siri ike karịa.Kpọtụrụ: TessEkwentị: 0086-76923188817 ma ọ bụ ekwentị: 0086-1392525920Weebụsaịtị: www.goodwinnlowelment
Onye na-ere ahịa nke ọma na-enye nzaghachi
Ezigbo vidiyo na nzaghachi n'aka onye ahia anyi. Ọ dị ka arịa ụlọ anyị nke ukwuu.E nwere usoro eji eme ihe.Biko kpọtụrụ anyị maka arịa osisi siri ike karịa.Kpọtụrụ: TessEkwentị: 0086-76923188817 ma ọ bụ ekwentị: 0086-1392525920Weebụsaịtị: www.goodwinnlowelment
Tebụl kọfị ọkachamara na ebe ngosi ndị ahịa anyị W219
Họrọ ọmarịcha ụlọ osisi osisi maka (ebe obibi / ime ụlọ / ime ụlọ / wdg). Họrọ site na imewe anyị dị iche ma gbakwunye na ụlọ gị. Zụọ ahịa n'ịntanetị.Kpọtụrụ anyị maka ihe ndị ọzọ na-ahụ maka ụlọ nri.Kpọtụrụ: TessEkwentị: 0086-76923188817 ma ọ bụ ekwentị: 0086-1392525920
A na-etinye arịa ụlọ kachasị mma na ụlọ ọrụ nke ndị ahịa anyị
Ezi osisi na-eji osisi na-eri ahịhịa dị na China. Afọ 20 nke ahụmahụ na-ebupụ arịa ụlọ. Site na ngwaahịa dị elu na ọrụ dị elu, ngwaahịa ndị anyị na-ekpuchikwa akụkụ niile nke ụwa.Anyị bụ ndị na-emepụta ngwaahịa a na-ewu ewu na China, Goodwin bụ nhọrọ kachasị mma gị.Kpọtụrụ anyị maka nri osisi na-eri nri.Kpọtụrụ: TessEkwentị: 0086-76923188817 ma ọ bụ ekwentị: 0086-1392525920Weebụsaịtị: www.goodwinnlowelment
Dongguan Goodwin Ngwá ụlọ Co., Ltd.
Dongguan Goodwin Ngwá ụlọ Co., Ltd e hiwere na 2001, emi odude ke Houjie, Dongguan, a ma ama n'ichepụta obodo na China, ekpuchi ebe ndị 120,000 square mita. Anyị na-elekwasị anya na ụlọ elu dị elu nke ndị America nke nwere osisi siri ike, ma tinye aka na imepụta, mmepụta na ire ụlọ nkwari akụ / ụlọ.
Ugbu a, anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 580, gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 injinia na ndị ọrụ nchịkwa na ọkwa dị iche iche. Otu kachasị mma na ndị ọrụ ọrụ, na-agbaso ịdị mma nke ịdị mma ngwaahịa na ịchụso ọrụ aka zuru oke. Dị ka ọkachamara ngwá ụlọ emeputa, anyị na-akwado ọtụtụ maara nke ọma anụ ụlọ ụlọ ọrụ dị ka Sheraton, Shangri-La, InterContinental, Marriott, Ritz Carlton, wdg Ka ọ dịgodị, anyị na ngwaahịa na-ere n'ụwa nile, tumadi na Russia, Ukraine, Lithuania , Bulgaria, France, Dubai na ọtụtụ mba ndị ọzọ. All ahịa nwere afọ ojuju na anyị mma.
Goodwin Furniture na-ekwenye n'echiche nke mmepe na-adigide, na-achọ ịnye ndị mmadụ nnukwu arịa ụlọ na ndụ mara mma. Obi siri anyị ike na ụdị ngwaahịa na ụdị ngwaahịa anyị nwere ike izute ihe ị chọrọ. Obi ụtọ na-anabata niile mba azụmahịa na-ere ahịa kpọtụrụ anyị na-eleta anyị factory!